Tongasoa ofisialy hanamarihana ny fiverenan'ny Air France any Seychelles nanomboka ny 5 Mey
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tongasoa ofisialy hanamarihana ny fiverenan'ny Air France any Seychelles nanomboka ny 5 Mey
Enga anie 23, 2018
Ny fiverenan'i Air France tany Seychelles, tamin'ny alàlan'ny kaompaniam-pitaterana vavy vaovao 'Joon' dia nanamarihana lanonana fanokafana tamin'ny talata.
Ny Airbus A340 an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, notaterin'ny Kapiteny Sophie Bordmann, dia niarahaba azy tamina fiarahabana canon rano rehefa tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, fotoana fohy taorian'ny 7 maraina.
Ny minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary ranomasina, Didier Dogley, sekretera lehibe ho an'ny fizahan-tany, Anne Lafortune, sekretera talen'ny sidina sivily, seranan-tsambo sy ranomasina, Garry Albert, lehiben'ny birao fizahan-tany Seychelles, Sherin Francis, ary koa manatrika eo amin'ny seranam-piaramanidina ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Seychelles Civil Aviation Authority sy ny Air France.
Ny hetsika dia natrehan'ny masoivoho frantsay tany Seychelles, Lionel Majesté-Larrouy, ny minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary an-dranomasina, Didier Dogley, niarahaba ny ekipa izay niasa hiantohana ny fiverenan'ny Air France any Seychelles, amin'ny alàlan'i Joon, Paris dia ho lasa ivon-toerana izay tsy hanampy amin'ny fampiroboroboana ny tsena frantsay fotsiny, fa koa hanampy amin'ny fampivoarana ny tsena hafa, hanamafisana kokoa ny indostrian'ny fizahantany, izay fototry ny harinkarem-pirenena.
Ny sidina mivantana niarahan'i Joon intelo isan-kerinandro nampifandray an'i Seychelles sy Paris dia nanomboka tamin'ny 5 Mey, nanamarika ny fiverenan'i Air France ho an'ny firenena nosy taorian'ny tsy naha-22 taona azy.
“Rehefa afaka 20 taona, faly izahay fa tafaverina any Seychelles. Dingana vaovao eo amin'ny fifandraisana misy amin'i Seychelles sy Air France. Miaraka amin'ny sidina 3 isan-kerinandro mankany amin'ny foibenay Paris Charles de Gaulle, tantanan'i Joon, manolotra safidy malalaka amin'ny fifandraisana amin'i Frantsa sy Eropa izahay, "hoy i Henri Hourcade, filoha lefitra zokiolona Caribbean Ocean Ocean ary Amerika Latina - Air France KLM.
Frantsa izay efa tsena fizahan-tany ho an'i Seychelles hatrizay, nihoaran'i Alemana tamin'ny 2014 ary tamin'ny 2017. Araka ny National Bureau of Statistics, France dia nandefa mpitsidika 17,289 2018 tany Seychelles hatreto tamin'ny taona 415, izay iray isan-jato noho ny tarehimarika tamin'ny taona lasa mandritra io fe-potoana io sy mpitsidika XNUMX ao ambadik'i Alemana, izay mitazona ny toerana voalohany.
Ny talem-paritry ny fizahan-tany any Seychelles ho an'ny Eropa, Bernadette Willemin, dia nilaza hoe: "Ny fahatongavan'i Joon dia vaovao tsara tsy ho an'ny tsena frantsay ihany satria Air France dia manana tamba-jotra manerantany, izay ahafahantsika mampivelatra tsena eropeana hafa, ary koa tsena any Amerika Avaratra sy atsimo. ”
Marihina fa ny sidin'i Joon intelo isan-kerinandro dia manolo ny sidina Air Seychelles izay nampifandray an'i Seychelles hatrany Paris, ankehitriny dia mifantoka amin'ny tambajotram-paritany ny zotram-pirenena.
Miala any Paris ny alatsinainy, alarobia ary asabotsy ny zotram-piaramanidina vaovao, izay mikendry ny millennial. Ny sidina miverina dia amin'ny talata, alakamisy ary alahady.